သေချာ ခိုင်လုံမှု မရှိတဲ့ သတင်း တွေကို ရှဲရင်းနဲ့ အမှားတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ သတင်း မှန်မမှန် စစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြ လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင် – Online News Post
သေချာ ခိုင်လုံမှု မရှိတဲ့ သတင်း တွေကို ရှဲရင်းနဲ့ အမှားတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ သတင်း မှန်မမှန် စစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြ လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်
By Cele MinPosted on March 5, 2021 March 5, 2021
ပရိသတ် အချစ်တော် မင်းသမီး ချော အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ တူမ ချောလေး ဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင် က တော့ အနုပညာ လမ်းကြောင်း ထက်မှာ အောင်မြင်စွာ လျှောက် လှမ်းနေ ရပြီပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ အားပေး ကူညီမှု ကို ရရှိထား သလို ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း လည်းအပြည့် ရှိတဲ့ မေတိုးခိုင် က ငယ်ရွယ် ပေမယ့် စိတ် ဓာတ် ခိုင်မာ ပြီး ရဲရင့် သူလေး ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါကြောင့် မေတိုးခိုင် က လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ မမောနိုင် မပန်းနိုင် အောင် ပါဝင် အားဖြည့် ပေးနေ တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
မေတိုးခိုင် က ပြည် သူ့ ဝန်ထမ်း တွေ အတွက် စိတ်ခွန် အားဖြစ် စေ မယ့် အားပေး စကား လေး တွေကို လည်း အမြဲတမ်း ပြော ကြား ပေးနေ သလို အားလုံး နဲ့ အတူ ရပ် တည် နေတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ့ အ ပြင် မေတိုးခိုင် က ပြည်သူ တွေ အတွက် အသုံး ဝင် ပြီး မှန် ကန် တဲ့ သတင်း အချက် အလက် တွေ ကို လည်း အမြဲ လို လို မျှဝေ ပေး နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အခု လည်း မေတိုးခိုင် က သတင်း အမှားတွေ ကြောင့် မလိုအပ် တာတွေမဖြစ် ရအောင် ဆင်ခြင် ရမယ့် နည်းလမ်း တွေကို သုံး သပ် ပြောပြ ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
မေတိုးခိုင် က “ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သတင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မရှဲဖို့အတွက် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်…. သတင်းတွေက အရမ်းများတော့ မလိုအပ်တဲ့နေရာကို အာရုံသွားစိုက်မိ ရင် တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အားလျော့သွားတာတွေ ဖြစ်စေမှာမို့ပါ 🙏…..တိကျတဲ့သတင်းတွေက နောက်ကျချင်ကျပါမယ် အချိန် နည်းနည်းယူပြီး စောင့် ပေးပါ…မန္တလေး ဒီနေ့ကျသွားတဲ့သမီးလေးရဲ့သတင်းဆို ကျသွားခါနီးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံပိုင်ရှင်က ဖြေရှင်းလာပါပြီ.. ဖြစ်နိုင်ရင် သတင်းဘယ်လောက်ခိုင်လုံသလဲဆို တာ တင်တဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ထိ လိုက် ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်…. ပိုင်ရှင်အကောင့်ရဲ့ history ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီသတင်းမှန်မမှန်နဲ့ Psywar တင်တဲ့အကောင့်လားဆို တာ ခွဲခြားသိနိုင်မှာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙏” ဆိုပြီး သူမရဲ့Instagram Story မှာ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ပရိသတ်တွေလည်း သတိထားလို့ရအောင် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ် နော် ။
source & photo credit : maytoekhine – mtk’ s ig story
ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသမီး ေခ်ာ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ရဲ့ တူမ ေခ်ာေလး ျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္ က ေတာ့ အႏုပညာ လမ္းေၾကာင္း ထက္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေလၽွာက္ လွမ္းေန ရၿပီပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အေဒၚျဖစ္သူရဲ့ အားေပး ကူညီမႈ ကို ရရွိထား သလို ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း လည္းအျပည့္ ရွိတဲ့ ေမတိုးခိုင္ က ငယ္ရြယ္ ေပမယ့္ စိတ္ ဓာတ္ ခိုင္မာ ၿပီး ရဲရင့္ သူေလး ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေမတိုးခိုင္ က လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ ဆိုရင္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ မေမာနိုင္ မပန္းနိုင္ ေအာင္ ပါဝင္ အားျဖည့္ ေပးေန တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ေမတိုးခိုင္ က ျပည္ သူ႔ ဝန္ထမ္း ေတြ အတြက္ စိတ္ခြန္ အားျဖစ္ ေစ မယ့္ အားေပး စကား ေလး ေတြကို လည္း အျမဲတမ္း ေျပာ ၾကား ေပးေန သလို အားလုံး နဲ႔ အတူ ရပ္ တည္ ေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ့ အ ျပင္ ေမတိုးခိုင္ က ျပည္သူ ေတြ အတြက္ အသုံး ဝင္ ၿပီး မွန္ ကန္ တဲ့ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေတြ ကို လည္း အျမဲ လို လို မၽွေဝ ေပး ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အခု လည္း ေမတိုးခိုင္ က သတင္း အမွားေတြ ေၾကာင့္ မလိုအပ္ တာေတြမျဖစ္ ရေအာင္ ဆင္ျခင္ ရမယ့္ နည္းလမ္း ေတြကို သုံး သပ္ ေျပာၿပ ထား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
ေမတိုးခိုင္ က “ခိုင္လုံမႈမရွိတဲ့သတင္းေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ မရွဲဖို႔အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္…. သတင္းေတြက အရမ္းမ်ားေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ေနရာကို အာ႐ုံသြားစိုက္မိ ရင္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အားေလ်ာ့သြားတာေတြ ျဖစ္ေစမွာမို႔ပါ …..တိက်တဲ့သတင္းေတြက ေနာက္က်ခ်င္က်ပါမယ္ အခ်ိန္ နည္းနည္းယူၿပီး ေစာင့္ ေပးပါ…မႏၲေလး ဒီေန႔က်သြားတဲ့သမီးေလးရဲ့သတင္းဆို က်သြားခါနီးမွာရိုက္ထားတဲ့ပုံပိုင္ရွင္က ေျဖရွင္းလာပါၿပီ.. ျဖစ္နိုင္ရင္ သတင္းဘယ္ေလာက္ခိုင္လုံသလဲဆို တာ တင္တဲ့အေကာင့္ပိုင္ရွင္ထိ လိုက္ ၾကည့္ေပးေစလိုပါတယ္…. ပိုင္ရွင္အေကာင့္ရဲ့ history ကိုလိုက္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီသတင္းမွန္မမွန္နဲ႔ Psywar တင္တဲ့အေကာင့္လားဆို တာ ခြဲျခားသိနိုင္မွာပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ” ဆိုၿပီး သူမရဲ့Instagram Story မွာ တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကဲ ပရိသတ္ေတြလည္း သတိထားလို႔ရေအာင္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပးလိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
Previous post “ CRPH ကဦးဆောင် ဖွဲ့စည်း ရမည့် တပ် အတွက် စစ်မှုထမ်း ပါမည် ” ဟု ကတိပြု လိုက်တဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်
Next post အသံတိတ်ပြီး နှုတ်ဆိတ်လွန်းနေတဲ့ ခန့်စည်သူအတွက် သတင်းဆိုးကြီးတစ်ခု လာပါပြီ